Home Wararka Doorashada kuraasta Aqalka Sare DGKG oo beri la qabanayo
Doorashada kuraasta Aqalka Sare DGKG oo beri la qabanayo
Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Heer Dowlad Gobaleed ee Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed ayaa shaaciyay jadwalka doorashada Aqalka sare ee xubna ku matalaya BJFS. Jadwalka guddiga ayaa lagu sheegay in maanta oo sabti ay bilaabaneyso diiwaan gelinta Musharixiinta Aqalka sare.
Madaxweynaha Dowlad Gobaleedka Koonfur Galbeed ayaa xalay shaaciyay liiska seddax kursi oo ka dhineyd kuraasta Aqalka sare Koonfur galbeed ay ku leedahay. Guddiga doorashada ayaa beri oo Axad ah shaaciyay in ay dhaceyso doorashaa Kuraasta dhiman.
Hoos ka akhriso Jadwalka Doorashada
Previous articleXisbiyada Mucaaradka Turkiga oo ka horyimid $30 Milyan loog deeqay Soomaaliya
Next articleCiidamo gurmad ah oo loo diray dagaalka ka socda duleedka Cadaado
Maamulka Hirshabeelle oo ka hadlay coolada kasoo cusboonaatay Gobolka Shabeelaha Dhexe
Farmajo Ma Rabaa Doorasho Dhexdheda Talla oo lagu heshiis yahay? Daawo...